युद्ध नरोकिने संकेत अमेरिकी सैन्य अखडामा इरानको हमला, अमेरिकाले खसाल्यो इरानमा प्लेन ! — SuchanaKendra.Com
युद्ध नरोकिने संकेत अमेरिकी सैन्य अखडामा इरानको हमला, अमेरिकाले खसाल्यो इरानमा प्लेन !
सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७६/९/२३ गते
युक्रेनको एउटा यात्रुबहाक विमान राजधानी तेहरान नजिकै दुर्घटना भएको समाचार आएको छ । इरान र अमेरिकाबीच बढ्दो तनाव रहेका बेला युक्रेनी विमान दुर्घटना भएको हो वा खसालिएको हो भन्नेबारे केही खुलेको छैन । सो विमानमा १८० जना यात्रु रहेको बताइएको छ ।
तेहरानको् इमाम खोमेइनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै सो दुर्घटना भएको स्थानीय सञ्चामाध्यमले जनाएका छन् । सो विमान गएराति दुर्घटना भएको बीएओ मिडियालाई उदृत गर्दै डेली मेलले जनाएको छ । इरानले इराकमा रहेको अमेरिकी सैन्य अखडामा बुधबार रकेट प्रहार गरेको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले इरानले दुई वटा अमेरिकी सैन्य अखडामा दर्जन बढी रकेट प्रहार गरेको जनाएका छन् ।इरानले अनबर प्रान्तमा रहेको ऐन–अल–असद बेस र इरबिलमा रहेको अर्को सुरक्षा अखडामा रकेट आक्रमण गरेको सीएनएनले बताएको छ। इरानको आक्रमणबाट पुगेको क्षतिबारे भने केही जानकारी दिइएको छैन।
अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले इराकमा अमेरिकी फौजप्रति भएको आक्रमणलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताउँदै इरानसँगको तनाव घटाउनुपर्ने बताएकी छिन्। उनले अमेरिकाले मात्रै होइन, विश्वले नै पनि युद्धको बहन गर्न नसक्ने चेतावनी पनि दिएकी छिन्। जर्नेल कासिम सुलेमानीको अन्तिम संस्कार मंगलबार गरिने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भए पनि शवयात्रामा भागदौड मच्चिँदा कम्तीमा पनि ३५ जनाको भन्दा बढी ज्यान गएपछि स्थगित गरिएको थियो। तेहरानमा भएको सुलेमानीको शवयात्रामा दश लाखभन्दा बढी मानिस उपस्थित भएको बताइएको छ।